Misoro yeNhau dzaNhasi, Chitatu, Gunyana 27, 2017
Zvimwe zvitoro zvovanza mitengo yezvinhu zviri kumhanyirwa neveruzhinji senzira yekudhurisira vatengi pavanenge vobhadhara mari yezvinhu zvavanenge vatenga pa till.
Mudzimai wevaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika, muchakabvu Joseph Msika, Ambuya Maria Msika, vanorangarirwa muBulawayo mutumbi wavo usati waendeswa kuHarare uko vachanovigwa kuHeroes Acre mangwana.
Chikwata chevakarwa muhondo yerusununguko chinotungamirwa naVaChris Mutsvangwa chinoti hachisi kuzoshandiswa zvakare sezvavaakaitwa nebato reZanu PF.
Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission, Amai Rita Makarau, vanoti vachazoitisa dzidziso yekunyoresa kuvhota yakanyanya kana mazuva ekunyoresa mudunhu mavanenge vari asarirwa nesvondo rimwe kuti vanhu vachinyoresa.
Muchirongwa cheLiveTalk na8pm tiri kutarisa mutoro mukuru wakatarisana nevanhu vari mu Diaspora panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka muZimbabwe, mhuri zhinji dzichitarisira rubatsiro kubva kuvanhu vari muDiaspora.